Madaxweyne Xasan Sheekh oo Ilhaan Cumar Villa Somalia ku qaabilay | Baydhabo Online
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Ilhaan Cumar Villa Somalia ku qaabilay
Madaxweynaha J.F ee Soomaaliya Md: Xasan Sheekh Max’uud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo ka mid noqotay golaha wakiillada Xisbiga Dimoquraadiga dalka Mareykanka.
Ilhaan Cumar waa gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan golaha Wakiilada Xisbiga Dimuqoraadiga dalka Mareykanka ee laga soo doorto gobolka Minnesota.
booqasho ayeey dalkeeda ku timid, waxa ay soo booqatay Villa Soomaaliya, si ay madaxweynaha dalka kula kulanto iyadoo uu wehliyey Seygeeda, waxaa soo dhoweeyey agaasimaha Hab-maamuuska madaxtooyada Soomaaliya, C/raxmaan Osmaan.
Madaxweynaha ayeey dhowr daqiiqad ku sugeyn halkii loo diyaariyey in ay kula kulmaan, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda, ayaa mar kale Ilhaan Cumar oo ah Sanotor Xisbiga Dimuqoraadiga Mareykanka matasha ku soo dhoweeyey dalkeeda.
Madaxweynaha, ayaa uga mahadceliyey booqashada ay dalka ku timid, sidoo kale waxa uu ugu hambalyeeyey guulihii ay ka soo gaartay doorashooyinkii ay ka qeyb-gashay ugu dambeynna ay ku guuleystay Kursigii ay u tartameysay.
Dhan kale Senator Ilhaan Cumar, ayaa farxad iyo reyn Reyn ku tilmaamtay kulanka ay madaxweyne Xasan Sheekh la yeelatay iyo sida loo soo dhoweeyey, waxa ay uga mahadceliyey dedaalka iyo guusha dowladda dalka gaarsiiyey ee ah in doorashooyin ay ka qabsoommaan, si gaar ahna haweenku loo siiyey qoondo 30%, taasina ay Soomaaliya uga horreyso dalal uu Mareykanku ka mid yahay.
Ilhaan ayaa ka soo guuleysatay Phyllis Kahn oo ah haweeeneydii Xisbiga Dimuquraadiga u mataleysay Golaha Wakiilada ee Gobalka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomali isna tartanka ku jiray.